अमेरिकाको आकाशमा देखियो एलियनको जहाज ! - NewsPolar NewsPolar
२८ बैशाख २०७९, बुधबार १७:०५
यो संसारभर हरेक दिन एलियन र यूएफओ देखिने दावी गरिएको छ । ब्रह्माण्डमा एलियनहरू छन् कि छैनन् ? वैज्ञानिकहरू वर्षौंदेखि यस प्रश्नको जवाफ खोज्दै आएका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफलता पाउन सकेको छैन ।
यसैबीच, अमेरिकाको असमानतामा एउटा रहस्यमय चम्किलो प्रकाश देखा परेको छ । यो घटना अमेरिकाको जर्जियाको हो । यो रहस्यमय प्रकाशको बारेमा मानिसहरूले विभिन्न दाबी गर्छन् । जर्जियाको आकाशमा देखिएको ज्योतिको सत्यता के हो जानौं ।
बिहीबार बिहान जर्जियाको आकाशमा चम्किरहेको र उज्यालो प्रकाश देखा पर्‍यो । हेर्दा, यो प्रकाश धेरै चम्किलो थियो र जेलीफिश जस्तो देखिन्थ्यो । सान एन्टोनियोको टेक्सास विश्वविद्यालयका मेकानिकल इन्जिनियरिङका प्राध्यापक क्रिस कम्ब्सले यो रहस्यमय प्रकाशको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् । प्रकाशले पूरै आकाश चम्किरहेको देख्न सकिन्छ ।
क्रिस कम्ब्सले भनेका छन् कि आकाशमा यो चम्किलो प्रकाश के थियो ? उनले अन्तरिक्षमा जेलीफिसजस्तै देखिने प्रकाश यूएफओ नभएको बताए । उनी भन्छन् कि यो स्पेसएक्स फाल्कन ९ रकेट थियो जुन केनेडी स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो क्यामेराबाट करिब ४०० किलोमिटरको दूरीमा थियो ।
केनेडी स्पेस सेन्टरबाट प्रत्येक वर्ष दर्जनौं रकेटहरू प्रक्षेपण गरिन्छ । तिनीहरूमध्ये केही छन् जसले आकाशमा जनावर जस्तै छविको छाप दिन्छ । भौतिकशास्त्र र सही समयको संयोजनका कारण आकाशमा यस्तो दृश्य देखिएको कम्ब्सले बताए ।
फाल्कन ९ रकेट इन्जिनको नोजलबाट निस्किएको ग्यासले आकाशमा जेलीफिस जस्तो आकार सिर्जना गरेको कम्ब्सले बताए । नोजल भित्र र बाहिर दबाव मा भिन्नता को कारण बल्ब आकार बनाइन्छ। वास्तवमा यो भिडियो १४ सेकेन्डको हो, यद्यपि यो घटना पाँच मिनेटको रेकर्ड भएको हुनसक्छ ।
जेलीफिशको आकार, यो कसरी बन्यो भन्ने बुझिन्छ, तर यो रहस्यमय चकित प्रकाश के थियो । यसबारे कम्ब्सका अनुसार फाल्कन ९ रकेटको प्रक्षेपण बिहान ५.४५ बजे गरिएको थियो । जहाँ क्षितिजको ठीक माथिबाट सूर्यको किरण आयो, जसका कारण निकास प्लम चम्कन थाल्यो । भेल जमिनमा अँध्यारो हुन सक्छ, तर आकाशमा सूर्यको किरणले चम्केको थियो । भौतिक विज्ञान र सही समयका कारण जेली फिश बन्ने गरेको उनले बताए ।